Oiri Yekuongorora Equipment Vagadziri |China Oiri Yekuedza Equipment Suppliers & Fekitori
GDFJ-VI Transformer Yakanyungudika Gasi Analyzer
GDFJ-VI Transformer Yakanyungudutswa Gasi Analyzer inotakurika gasi chromatograph yakakodzera pa-saiti kukurumidza kuongororwa.Inobatanidza chromatographic kuona, kuongorora uye kuongororwa mune imwe, pamwe neiyo micro detector, mini gasi sosi uye yakavakirwa-mukati yekubata screen komputa.
Coulometric Karl Fischer tekinoroji inoshandiswa kuyera chaizvo kuronda hunyoro hwakayerwa sampuro ine.Tekinoroji inoshandiswa zvakanyanya pakururama uye mutengo wakachipa webvunzo.Muenzaniso weGDW-102 unoyera kucherekedza unyoro pamasampuli emvura, akasimba uye gasi zvinoenderana nehunyanzvi.
GDOH-II insulating Oiri Gasi Zvemukati Tester
GDOH-II Insulating Oiri Gasi Yemukati Tester ndeye chizvarwa chitsva tester inotora yakaunzwa kunze kwepamusoro-soro sensor uye tekinoroji nyowani.Iyo yakavakirwa paiyo DL423-91 simba indasitiri chiyero uye yakakodzera nyika zviyero.
GDW-106 Oiri Dew Point Tester's Guide
Nguva yewaranti yeiyi nhevedzano igore IMWE kubva pazuva rekutumira, ndapota tarisa kune yako invoice kana magwaro ekutumira kuti uone akakodzera mazuva ewaranti.HVHIPOT corporation waranti kumutengi wekutanga kuti chigadzirwa ichi hachizove chisina hurema muzvinhu uye magadzirirwo pasi pekushandiswa kwakajairwa.
Automatic Acid Value Tester yakagadzirirwa kuyedza kukosha kweasidhi yemafuta ekushandura, mafuta eturbine nemafuta asingadziviriri moto etc. PC control system inogona kuvandudza kushanda kwekushanda uye kuderedza kukuvadzwa kweorganic solvents nemakemikari kumuviri wemunhu.
GDZL-50L Oiri Sefa Machine
Muchina weGDZL-50L unogona kunyatsobvisa hunyoro, gasi uye kusvibiswa mumafuta anodzivirira, kuvandudza kudzvanywa kwemafuta uye kunaka kwemafuta, kuve nechokwadi chekushanda kwakachengeteka kwemidziyo yemagetsi.
GDBS-305 Automatic Flash Point Yakavharwa Cup Tester
GDBS-305 otomatiki yakavharwa kapu flash point tester ndiyo inoyedza mudziyo yakavharika kapu flash point yezvigadzirwa zvepetroleum.Inoshandisa module dhizaini iyo muenzi mumwe anogona kudzora akati wandei ekuyedza choto, kuyedza akasiyana masampuli panguva imwe chete kana zvakasiyana.
GDKS-205 Otomatiki Flash Point Yakavhurika Mukombe Muedzi
GDKS-205 otomatiki yakavhurika kapu flash point tester ndiyo inoyedza yakavhurika kapu flash point yezvigadzirwa zvepetroleum.Inoshandisa module dhizaini iyo muenzi mumwe anogona kudzora akati wandei ekuyedza choto, kuyedza akasiyana masampuli panguva imwe chete kana zvakasiyana.
GDC-9560B Power System Insulation Oiri Gasi Chromatograph Analyzer
GDC-9560B Gasi Chromatograph Analyzer ndeyekuongorora iyo gasi yemukati yemafuta ekudzivirira negasi chromatographic nzira.Izvo zvinoshanda kutonga kana iyo yekumhanya ine chikanganiso chingangoita senge-kupisa-kupisa, kuburitsa kana kwete, kuve nechokwadi chekuchengetedzwa kwemagetsi grid.